W Salka dhiga guryaa seexda. Gabayada Abwaan Hadraawi Rabow duumadaadiyo inta cuduro duushee Docwareenka feedhaha, sambadada dalooshiyo Dacuun hanugu ridin. Bulxan goobo dirireed, Afar-geeslihiisii, Geyigoo dhan saamee, Af-Qallooc gargara-baxa, Iyo geeddi-nololeed, Hadba gaawe saameel, Gaashaan nin sidan jiray, Iyo hibada geesiga, Gabayguna u fududaa, Faraskana la golongolay, Ruuxii gartow sheeg? Laamaha xorriyaddiyo Xayn-daabka calankee Xejinaaya dhalashada Xididkay ka beermaan Xinjir laga waraabshaay. Gudub magacu waa hore Galbay oo la wada maqal Dunidoo dhan wada gaadh Gabdhihiina loo sheeg Iyadaan god gabbayada deyn Gibishay I saareen Geestee u duubaa? Hadduu marba qayb la ooyo, Heedhee Sahraay heedhe Marka haaddu socod deyso Dhirta sare tukuu fuulo Gorayadu sanqadha reebto Adna soonka xidho maaha Mugdi talada sii maaha Berri iyo siday doonto Sug cadceedda maqan maaha Saqda dhexe habeen soocan Gudcur simay adduunkeenna Wax siraata noqo weeye Heedhee Sahraay heedhe Saran seerka jiilaalka Surbacaadka jaahweynta Sumal-haadka roob waaga Iyo solanka daaduunka Cirka oo sabaad guurey Dhulka oo huwadey siigo Iyo dogobbo soogsoogan Haxraawi beladu sooyaanto Saadaashu beenowdo Saca nuguli kaa leexdo Adna sebenka raac maaha Inan sabadu duugoobin Sayax iyo ugbaad waayin Sudda iyo degaankaagu Surmi iyo hadrawi leeyan Ama saacu guur-guurin Sohda ceelku dheeraannin Adaa yeeli kara saasba.
Wuxuu yiri "ku daayaa" Maxaa daaray buu yiri? Wuxu yiri "Dabbaalkii, Lafihi Daabbad qaarkood sow duleedka kama helin, Duf ku bexe wedkiisii Doqonniimo gurayaa, nacasnimo daldalayaa dabadeeto eedyaa".
Wuxuu yiri dul-badanihi, "doonnidii la raran jirey ma nafbaa ka daydeen, mise wuu dibboodoo dugaag cayra baa helay? Kuye "daayinkiisii, Dembi dhaaf ha siiyee sawti duugti loo qalay, Ducadii adoogeen" Wuxuu yidhi "duqeennii, Degta inagu sidi jirey isaguna ma dubuq yidhi?
Kuye "duumo xaaqdaa, intaan Dahabadaadii Duulal raacay loo tirin, iyagana ka daba gee wixii aakhiraw degey" Kuye "Dahabadaydii, iyaduna ma duug baa maxaa loogu daw-galay? Kuye "duunyadeennii, Daratiyo kud weydii Dadna waa anoo qura". Duleedoo aqoonsaday, inaan Guul danbaysoo lagu diirsadaa harin, ayaa daymo Murugo ah Dibno jiitamaayiyo, Deelqaaf ku yiri Ciil Danab iyo Warjaaf iyo, Daacuun ku kala goo!!! Reerkan Daaha loo rogey, Dubbihii Illaahay Darandoorri ugu dhacay, Dam-daguugan laga dhigay miyaad Guul-darraystow, Nabad iyo dardaan iyo igu tiri Dareen ma leh, waxa Duur-xulkaagani kaa daarran yahay sheeg!
Wuxu yiri "Degmadayada, Dugsi keliya baa jira Diric keliya baa dhiga, Dersi baanu baranaa Dulliga iyo Beentiyo, Doqonniimo faankiyo Qoqobkiyo Dirsoociyo, Ducadiyo yaboohdiyo inta laga diqoodiyo, Dawarsigu ka kow yahay Digashadu u mudan tahay, marka Qalin daraalaha Dilla sheegga la cuskado, Imtixaanka loo dego ka dul dhiga jawaabtiyo, Doorkiyo wax-garadkaa inta daadata u badan" Wuxu yidhi "Degmadayada, Dibnahaa la cunayaa Qosolkaa la deexdaa, adigoo il dabayaa Dadku inaanay kaa garan, misna lagu dadaalaa marka aad Duleedow, sidaad doonto weydaad sidaad diidday yeeshaa" Wuxu yidhi "Degmadayada, si dareenka garashadu aanu nooga noqon duug, Dawrigaan hayin ahayn Ma-dagmaha indhaHA qaba, tiisa waw daboollaa waanu daadahaynaa, wuxu daymo bogan laa Dulmar bay ku gaaraan.
Doqonniimo lama dhayo, Hedna lama daweyn karo Dadka aad ka dhalatiyo, Dalka aad u dhalatiyo Nin la yidhi Danta u tali, Hodon laga dabqaatiyo Dirac iyo Fariid noqo, Dibin daabyo ku ogow Duco iyo xusuus iyo, duug aad ka dhaxashide xilka Daacad ugu hay, ha dullayne gaarsii meeshay daraaddeed, u galeen dagaakii diiftiyo kulka lahaa, dib u dhaca ka maaree, Dumar iyo rag hawl geli kartidooda deeqsii, Derejow sugnaatoo Guul baa u dagatee, Alla doori saw kaa darka jiiray Maaweel!
Waxaan dooddi kaga baxay, hadalkana ku daa iri Nin dab liqay Rashiidow, Dhuxul buu ka daacaa ma Darmaanta booddee, didday baan u jeedaa?
Wuxuu yiri "ku daayaa" Maxaa daaray buu yiri? Wuxu yiri "Dabbaalkii, Lafihi Daabbad qaarkood sow duleedka kama helin, Duf ku bexe wedkiisii Doqonniimo gurayaa, nacasnimo daldalayaa dabadeeto eedyaa". Wuxuu yiri dul-badanihi, "doonnidii la raran jirey ma nafbaa ka daydeen, mise wuu dibboodoo dugaag cayra baa helay? Kuye "daayinkiisii, Dembi dhaaf ha siiyee sawti duugti loo qalay, Ducadii adoogeen" Wuxuu yidhi "duqeennii, Degta inagu sidi jirey isaguna ma dubuq yidhi? Kuye "duumo xaaqdaa, intaan Dahabadaadii Duulal raacay loo tirin, iyagana ka daba gee wixii aakhiraw degey" Kuye "Dahabadaydii, iyaduna ma duug baa maxaa loogu daw-galay? Kuye "duunyadeennii, Daratiyo kud weydii Dadna waa anoo qura".
Diiwaanka Abwaanada Soomaaliyeed
Heedhee Sahraay heedhe Bulsho saami loo tuurtay Shan siyood wax loo yeelay Samir inay xigtaan maaha Surka inay dhigtaan maaha Sas inay didaan gabaywda Inay suudalaan maaha Sardho inay galaan maaha Sixir inay dirtaan maaha Inay kala saftaan maaha Nin I sugayayow heedhe Anigoo ku sugey heedhe Maxaad ii sugtaa heedhe? Maxaa duunyo weli nool? Irmaanta xaqeeda siiya, Hadduu yahay uur-ka-gaal, Heedhee Sahraay heedhe Sar daruuran oo maasa Mar Abu Sarmaantiiya Dhacle baarka loo seesay Boqor wada xiyaakhaysan Sildiyaal jiljila dhiibsan Tusbax dhawr sagaal laaba Iyo qool sunaar dheehan Subeciyad xiddiyo hadrawai leh Adigoo siddeeddaas hal Iyo timaha oo soohan Ku darsaday sifaa guudka Garashiyo sarriig sheegtay Ma qofkaa sitaa jooga. Guuguule wuxuu yidhi; Cabdallaa gurracantiyo, Ka gar-naqa la-yaabkoo, Halka loo gol leeyahay, Xogta sii god raacee, Galabtiyo ogaalkiis, Nin ka gura u doon doon, Keyse guusha loo daa, Isna wuxu war gaadhsiin, Xerta gacan-togaalaha! Gabgabteennu xiisiyo, Ma gabiib istaagbaa, Galgalkiyo xig xigashadu, Ma Galbeed-ku-dayashaa, Iyo gaal isu ekayn? Ibleys didsadaynu nahay Miisaanku doc buu jiraa Hub maxaad ka sidataa? Maxaan goor la ssahdiyo habeenkoo gabbala-ridey laba gelin is-raaceen gaaf-meerka socotada iyo guura-bahallaha geesaaska fiintiyo galow fooridiisiyo galayaxa rasaastiyo col gurguuranaayiyo gellimaad ku sara kacay.
Hoyga bulshada bootaanlimited
Midha-Daray raggiinaa Duudduub ku liqayow Kolley geedka duuggiyo Taariikh la daastiyo Laga diirto magac hadha Sida diirta xagatoo Dadnimada arradisee Dib maxaa u dhigateen Duniduba ma maantaa? Mareegta raadraaca taariikhda,hidaha iyo dhaqanka Intii ay dhul weynaha Raggii dhoofay haysteen Sida awr dhufaanaa Usha laygu dhaqayoo Labadayda dhaban baan mid markay dhirbaaxaan ka labaad u dhigayoo intaas waan dhursugayee inta dhiisha qabada ah wuxuun iigu dhacayaan idinna maa Hadrsawi dhawrtaan? Hadday agaraadam tahay, Hor Illaahay adigiyo Hodan maysku aragteen? Ummuuraha toosay daawo, Barbarkee ka maqan tahay? Buurrantu muuniyo Barkhad kaydsan maahee Barar taws ah weeyaan Bugtadiyo xanuunkuna Haddaan baadhay waa ciil Gabagada shabeelow Hooy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Beri waxaan ogsoonaa Adigoon ka soo bixin Casha boholaheedoo Dhirta baaxad-weynta ah Baarkeeda seexdee Maqlay inad bannaanniyo Timi badhaha hawdkoo Bulbullow libaaxii Boqortooyadiisii Duhur ugu badheedhoo Burjigii ka furatoo Bili qaadi weydee Beelahanagtaadaan Kaa soo bariidshoo Budulkay la soo galay Barkintaad ku jiiftee Waxba baadi xoolaad Beryahaas ma kulanteen?